यसरी गर्न सकिन्छ घरको छतमै तरकारी फलाउन सकिने कौसी खेती !
Photo Source : herbstohome.in
तरकारीको भाउ दिनदिनै बढिरहेको छ। किसानबाट कम दाममा ल्याइएको तरकारी उपभोक्ताले महँगो दाममा किन्न बाध्य छन्। दाम तिरेर पनि स्वस्थकर तरकारी पाउन गाह्रो छ। तर अब तपाईँले घरको छतमा नै तरकारी रोपेर आफूलाई पुग्ने तरकारी फलाउन सक्नहुन्छ। पछिल्लो समय विकसित भएको कौसी खेतीले यस्तो अवसर दिएको छ। यो लेखमा हामी कौसी खेती कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउँदै छौँ।
कौसी खेती भनेको के हो?
बढ्दो सहरीकरणले खेती गर्नका लागि पर्याप्त जमिन छैन। घरको कौसी मात्र खाली हुन्छन्। कौसीमा गमला लगायत अन्य प्लास्टिकको जर्किन तथा बट्टाहरूमा आफूलाई पुग्ने जति तरकारी सजिलै उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी गरिने खेती परम्परागत हो र यसलाई नै कौसी खेती भनिन्छ। कौसी खेतीबाट घरमै ताजा, स्वस्थकर र अर्ग्यानिक तरकारी फलाएर उपभोग गर्न सकिन्छ।
कौसी खेती केमा गर्ने?
गमला, सिमेन्टको बोरा, पुराना हेल्मेट, बाल्टी लगायत अन्य पानी नचुहिने भाडाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। गमला तथा अन्य भाडाहरूमा रोपिएको तरकारी भन्दा जमिनमा रोपिएको तरकारीले पोषक तत्त्वहरू सजिलै पाउँछन्। त्यसैले यस्तो खेती गर्दा माटो मलिलो बनाउनु पर्छ।
मल कसरी तयार पार्ने?
कौसी खेतीका लागि बिभिन्न तरिकाबाट मल उत्पादन गर्न सकिन्छ जस्तै: गँड्यौलाको मल, कुखुराको सुली लगायत अन्य पशुपंक्षीको विस्टा साथै घरको फोहोरहरू कुहाएर पनि मल बनाउन सकिन्छ। अहिले बजारमा विभिन्न प्रकारका कम्पोष्ट मलहरू किन्न पनि पाइन्छ।
तरकारीको छनौट कसरी गर्ने?
कौसी खेती गर्दा सुरुमा कम मिहेनत लाग्ने र छिटो बढ्ने तरकारी रोप्नु पर्छ। मेथी, साग, खुर्सानी, धनियाँ जस्ता तरकारीबाट सुरु गर्न सकिन्छ। त्यस पश्चात सबै किसिमको तरकारी र फलफूलहरू सजिलै फलाउन सकिन्छ।
के के फाइदाहरू छन्?
घरको छतमा सानो ठाउँमा गरिने भएकाले काम गर्न मान्छे लगाइराख्नु पर्दैन। खाली समयको पनि बचत हुन्छ।
गमला, बोरा, प्लास्टिकका झोला, हेल्मेट, लगायत अन्य प्लास्टिकका बट्टाहरूमा सजिलै गर्न सकिन्छ।
मलका लागि घरायसी फोहोर प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसरी उत्पादन भएको मल कम भएमा मात्र मल किन्नका लागि थप खर्च हुन्छ।
धेरै बिउबिजनहरू नचाहिने भएकाले बजारमा सजिलै पाउन सकिन्छ। सरकारले यस्तो खेती गर्न बिउबिजन अनुदान पनि दिन सक्छ।
खेती गर्दा एउटै गमला तथा भाडामा धेरै प्रजातिको तरकारी रोप्न सकिन्छ।
कौसी खेती गर्दा बजारको महङ्गो तरकारीको साटो घरमै फलेको स्वस्थकर तरकारी उपभोग गर्न सकिन्छ। यसरी बगैँचा बनाउन, बिउबिजन र मलखादको मात्र पैसा लाग्छ। त्यसैले कौसी खेती गर्दा खर्चको तुलनामा फाइदाहरू धेरै छन्। तपाईँले पनि आफ्नो स्थानबाट यो खेतीको लागि पहल गर्न सक्नुहुन्छ।